Maahmaahyadii 4 SOM;NIV - Xigmaddu Waa Sarraysaa - Wiilashoy, - Bible Gateway
Maahmaahyadii 3Maahmaahyadii 5
Maahmaahyadii 4 Somali Bible (SOM)
Xigmaddu Waa Sarraysaa
4 Wiilashoy, aabbe edbintiisa maqla,
Oo u jeesta inaad wax garataan.
2 Waayo, anigu waxaan idin siiyaa tacliin wanaagsan,
Haddaba cilmigayga ha ka tegina.
3 Waayo, aniguba waxaan aabbahay u ahaa wiil,
Oo mid yar oo bacbac ah oo madi ah ayaan u ahaa hooyaday.
4 Isagu wax buu i baray, oo wuxuu igu yidhi,
Qalbigaagu erayadayda ha xajisto;
Amarradaydana dhawr, oo waad noolaan doontaa.
5 Xigmadda doono, waxgarashadana doono;
Hana illoobin, oo erayada afkaygana dib ha uga noqon.
6 Xigmadda ha ka tegin, oo way ku nabad gelin doontaa.
Jeclow, oo way ku dhawri doontaa.
7 Xigmaddu wax walbay ugu horraysaa, sidaas daraaddeed xigmadda doono;
Wax kastoo aad hesho weliba waxgarasho doono.
8 Iyada sarraysii, oo iyana way ku dallicin doontaa;
Oo sharaf bay kuu yeeli doontaa markaad iyada isku duubtid.
9 Iyadu waxay madaxaaga siin doontaa wax sharraxsan,
Oo waxayna kuu yeeli doontaa taaj quruxsan.
10 Wiilkaygiiyow, maqal oo hadalladayda aqbal.
Oo sannadaha cimrigaaguna way badnaan doonaan.
11 Anigu waxaan ku baray jidkii xigmadda;
Oo waxaan kugu hoggaamiyey waddooyinkii qummanaanta.
12 Markii aad socotid tallaabooyinkaagu cidhiidhi ma noqon doonaan,
Oo haddaad oroddidna ma turunturoon doontid.
13 Edbinta xajiso, oo ha iska sii deyn;
Hayso, waayo, iyadu waa noloshaada,
14 Waddada kuwa sharka leh ha gelin,
Oo jidka xumaanfalayaashana ha qaadin.
15 Ka leexo, hana marin,
Ka noqo oo hareer ka mar.
16 Waayo, iyagu ma seexdaan haddaanay xumaan falin,
Oo hurdadoodana waa laga qaadaa iyagoo cid kufiya mooyaane.
17 Waayo, iyagu waxay cunaan kibistii sharnimada,
Oo waxay cabbaan khamrigii dulmiga.
18 Laakiinse waddada kuwa xaqa ahu waa sida iftiinka waaberiga oo kale,
Kaas oo hadba soo kordha ilaa uu noqdo maalin cad.
19 Jidka kuwa sharka lahuna waa sida gudcurka oo kale.
Oo iyagu garan maayaan waxay ku turunturoodaan.
20 Wiilkaygiiyow, erayadayda dhegayso,
Oo hadalladaydana dhegta u dhig.
21 Indhahaaga hortooda yaanay ka fogaan,
Oo qalbigaaga dhexdiisa ku hayso,
22 Waayo, iyagu waa u nolol kuwa hela,
Oo jidhkooda oo dhanna waa u caafimaad.
23 Digtoonaan qalbigaaga u dhawr,
Waayo, isagay noloshu ka soo baxdaaye.
24 Af qalloocan iska saar,
Oo bushimo maroorsanna iska fogee.
25 Indhahaagu qummaati wax ha u fiiriyeen,
Oo indhahaaga daboolkooduna si toosan hortaada ha u eegeen.
26 Waddada cagahaaga aad ugu fiirso,
Oo jidadkaaga oo dhammuna ha toosnaadeen.
27 Xagga midigta iyo xagga bidixda toona ha u leexan,
Oo cagtaadana xumaanta ka fogee.